ယီမင်အစိုးရအကြီးအကဲများကိုပစ်မှတ်ထားသည့်ကားဗုံးခွဲမှုအတွင်းလူ ၅ ဦးသေဆုံး - Xinhua News Agency
အေဒင်၊ အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ယီမင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည့် အေဒင်မြို့တွင်ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေနေ့၌ ယီမင်နိုင်ငံအစိုးရထိပ်သီးအရာရှိများ၏ ယာဉ်တန်းအား ပစ်မှတ်ထားကာ ကားဗုံးခွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း လုံခြုံရေးအရာရှိတစ်ဦးကဆင်ဟွာသို့ပြောကြားခဲ့သည်။
“အေဒင်ခရိုင်တာဝါဟီမြို့တွင် အစိုးရအရာရှိကြီးတွေလိုက်ပါစီးနင်းလာတဲ့ ယာဉ်တန်းကိုပစ်မှတ်ထားကာ ချိန်ကိုက်ဗုံးတပ်ဆင်ထားတဲ့ ကားဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်” ဟု အမည်မဖော်လိုသည့်ဒေသခံလုံခြုံရေးတစ်ဦးကဆိုသည်။
ယင်းကားဗုံးတိုက်ခိုက်မှုသည် အေဒင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအာမက်လမ်လက်စ်နှင့် အခြားသောဆော်ဒီကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့် ယီမင်အစိုးရအရာရှိများ၏ ယာဉ်တန်းများကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူကဆိုသည်။
ဒေသခံအာဏာပိုင်များ၏ အဆိုအရ မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးတို့မှာ ဗုံးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာမရရှိဘဲ အန္တရာယ်မှ လွတ်ကင်းကြောင်းသိရသည်။
တာဝါဟီရှိ ဗုံးပေါက်ကွဲရာနေရာမှ မီးခိုးလုံးများထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြောင်းမျက်မြင်သက်သေများကဆိုသည်။
အေဒင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုစောင့်ကြပ်သည့် စစ်သား၅ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး အခြားဒဏ်ရာရရှိသူများရှိကြောင်း အေဒင်ဒေသခံအာဏာပိုင်အရာရှိတစ်ဦးက ဆင်ဟွာသို့အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်အထိ အဆိုပါ ကားဗုံးဖောက်မှုအား မည်သည့်အဖွဲ့ကလုပ်ခဲ့သည်ကို ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပေ။သို့ရာတွင် ယီမင်အစိုးရ အရာရှိများက ပြီးခဲ့သည့် လများအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများအတွက် အယ်လ်ကေးဒါးအဖွဲ့ကဲ့သို့သော အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များကို ပြစ်တင်ထားသည်။
ယီမင်နိုင်ငံ၏ ယာယီမြို့တော်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့် ဗျူဟာမြောက်ယီမင်ကမ်းရိုးတန်းမြို့၏ လုံခြုံရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ဒေသအာဏာပိုင်များကကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
သို့ရာတွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကတည်းက ဆော်ဒီက ကျောထောက်နောက်ခံပြုလုပ်ထားသည့် ယီမင်အစိုးရသည် အေဒင်တွင် ကြိုကြားကြိုကြားဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
ယီမင်နိုင်ငံသည် မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်များစွာကို အီရန်တို့ ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့် ဟူသီ သူပုန်များက သိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်း နှင့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Hadi အစိုးရအား Sanaaမြို့တော်မှ နှင်ထုတ်ခံရခြင်းကြောင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကတည်းက ပြည်တွင်းစစ်နွံနစ်ခဲ့ရသည်။ (Xinhua)
ADEN, Yemen, Oct. 10 (Xinhua) — A massive explosion struckaconvoy of high-ranking Yemeni government officials in the country’s southern port city of Aden on Sunday,asecurity official told Xinhua.
“A booby-trapped vehicle exploded in Aden’s district of Tawahi, targetingatraveling convoy carryinganumber of government officials,” the local security source said on condition of anonymity.
According to the local official, the city’s governor and the minister of the agriculture survived the bombing attack unhurt.
Witnesses said that columns of black smoke were seen rising from the bombing site in Tawahi.
An official of Aden’s local authority confirmed to Xinhua that five soldiers in charge of guarding Aden’s governor were killed andanumber of others wounded.
No group has claimed responsibility for the car bomb attack yet. However, Yemeni government officials blamed terror groups such as al-Qaida for the bomb explosions during the past months.
Yemen has been mired inacivil war since late 2014, when the Iran-backed Houthi rebels seized control of several northern provinces and forced the internationally-recognized government of Hadi out of the capital Sanaa.&nbsp; ■